ကျောဘက် ကင်မရာ ၆လုံး ပါတဲ့ Sony Xperia စမတ်ဖုန်း ထွက်ပေါ်လာ | MyTech Myanmar
ကျောဘက် ကင်မရာ ၆လုံး ပါတဲ့ Sony Xperia စမတ်ဖုန်း ထွက်ပေါ်လာ
စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးအတွက် ကင်မရာဟာ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်လာတာနဲ့အမျှ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာ ကင်မရာအပိုင်းကိုလည်း ဦးစားပေး ပစ်မှတ်ထားလာကြပါတယ်။ ကင်မရာ တစ်လုံးတည်းကနေ ပုံထွက်ကောင်းအောင် ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာထက် ကင်မရာ Sensor တွေ အများကြီး အသုံးပြုပြီး မြင်ကွင်းအမျိူးမျိူးကို ရိုက်ကူးနိုင်အောင် ပြုလုပ်တာက သုံးစွဲသူတွေကို ပိုပြီး အကြိုက်တွေ့စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အခုနောက်ပိုင်း စမတ်ဖုန်းတွေမှာ ကျောဘက်ကင်မရာ အနည်းဆုံး ၂လုံးကနေ အများဆုံး ၅လုံးအထိ ပါဝင်လာကြတာပါ။
လက်ရှိမှာ ကျောဘက်မှာတင် ကင်မရာ Sensor အများဆုံး တပ်ဆင်ထားသူဟာ Nokia9PureView ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ကင်မရာ ၅လုံးအထိ ပါဝင်ပါတယ်။ RGB ကင်မရာ ၂လုံး နဲ့ Monochrome ကင်မရာ ၃လုံးတို့ကို ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပေမယ့် 3D TOF (Time Of Flight) ကင်မရာလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့ ကြားသိခဲ့ရတဲ့ သတင်းအရဆိုရင် Nokia9PureView ဟာ ကျောဘက် ကင်မရာအများဆုံး စမတ်ဖုန်းဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကို အကြာကြီး သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့ထက် ဆရာကျမယ့်ကောင် သိပ်မကြာခင်မှာ ပေါ်ထွက်လာနိုင်လို့ပါ။
Samsung Leaks တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူသိများတဲ့ Tipster Max J. ဟာ Sony အနေနဲ့ ကျောဘက် ကင်မရာ ၆လုံးပါတဲ့ Xperia စမတ်ဖုန်းသစ်ကို ထုတ်လုပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Front Facing ကင်မရာကလည်း ၂လုံး တပ်ဆင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ Xperia စမတ်ဖုန်းသစ်ဟာ လက်ရှိမှာ တီထွင်နေဆဲ အဆင့်သာရှိသေးတာကြောင့် သူရဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ Specs တွေကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချိူ့သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့ Main ကင်မရာအပြင် Wide-angle Lens, Telephoto Lens, 3D TOF ကင်မရာနဲ့ Monochrome ကင်မရာ ၂လုံးကို ကျောဘက်မှာ တွဲဖက်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပြီး ရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်မှာ Wide-angle Lens ပူးတွဲပါလာနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။
ကြောဘကျ ကငျမရာ ၆လုံး ပါတဲ့ Sony Xperia စမတျဖုနျး ထှကျပျေါလာ
စမတျဖုနျး တဈလုံးအတှကျ ကငျမရာဟာ အရေးကွီးဆုံး အစိတျအပိုငျးတှထေဲက တဈခုဖွဈလာတာနဲ့အမြှ စမတျဖုနျးထုတျလုပျသူတှဟော ကငျမရာအပိုငျးကိုလညျး ဦးစားပေး ပဈမှတျထားလာကွပါတယျ။ ကငျမရာ တဈလုံးတညျးကနေ ပုံထှကျကောငျးအောငျ ပွုလုပျတယျဆိုတာထကျ ကငျမရာ Sensor တှေ အမြားကွီး အသုံးပွုပွီး မွငျကှငျးအမြိူးမြိူးကို ရိုကျကူးနိုငျအောငျ ပွုလုပျတာက သုံးစှဲသူတှကေို ပိုပွီး အကွိုကျတှစေ့ပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး အခုနောကျပိုငျး စမတျဖုနျးတှမှော ကြောဘကျကငျမရာ အနညျးဆုံး ၂လုံးကနေ အမြားဆုံး ၅လုံးအထိ ပါဝငျလာကွတာပါ။
လကျရှိမှာ ကြောဘကျမှာတငျ ကငျမရာ Sensor အမြားဆုံး တပျဆငျထားသူဟာ Nokia9PureView ဖွဈပွီး စုစုပေါငျး ကငျမရာ ၅လုံးအထိ ပါဝငျပါတယျ။ RGB ကငျမရာ ၂လုံး နဲ့ Monochrome ကငျမရာ ၃လုံးတို့ကို ပေါငျးစပျတပျဆငျထားတာဖွဈပမေယျ့ 3D TOF (Time Of Flight) ကငျမရာလညျး ပါဝငျပါသေးတယျ။ ဒီနေ့ ကွားသိခဲ့ရတဲ့ သတငျးအရဆိုရငျ Nokia9PureView ဟာ ကြောဘကျ ကငျမရာအမြားဆုံး စမတျဖုနျးဆိုတဲ့ ဂုဏျကို အကွာကွီး သိမျးပိုကျထားနိုငျတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သူ့ထကျ ဆရာကမြယျ့ကောငျ သိပျမကွာခငျမှာ ပျေါထှကျလာနိုငျလို့ပါ။
Samsung Leaks တှနေဲ့ ပတျသကျပွီး လူသိမြားတဲ့ Tipster Max J. ဟာ Sony အနနေဲ့ ကြောဘကျ ကငျမရာ ၆လုံးပါတဲ့ Xperia စမတျဖုနျးသဈကို ထုတျလုပျနပွေီ ဖွဈကွောငျး ထုတျဖျောပွောကွားလာပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Front Facing ကငျမရာကလညျး ၂လုံး တပျဆငျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ အဆိုပါ Xperia စမတျဖုနျးသဈဟာ လကျရှိမှာ တီထှငျနဆေဲ အဆငျ့သာရှိသေးတာကွောငျ့ သူရဲ့ ဒီဇိုငျးနဲ့ Specs တှကေိုတော့ အတိအကြ မသိရသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခြိူ့သော ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှကေတော့ Main ကငျမရာအပွငျ Wide-angle Lens, Telephoto Lens, 3D TOF ကငျမရာနဲ့ Monochrome ကငျမရာ ၂လုံးကို ကြောဘကျမှာ တှဲဖကျတပျဆငျထားနိုငျပွီး ရှဘေ့ကျမကျြနှာပွငျမှာ Wide-angle Lens ပူးတှဲပါလာနိုငျကွောငျး ခနျ့မှနျးပွောဆိုထားကွပါတယျ။
MyTech Myanmar2019-06-11T17:20:21+06:30June 11th, 2019|Cameras, Mobile Phones, News, Sony|